Antananarivo Vehivavy 4 indray no voan'ny Coronavirus
Nahitana tranga 4 vaovao ireo olona notiliana, ka niakatra 132 ny isan’ny olona voamarina fa voa hatramin’izay, hoy ny Pr Vololontiana Hanta omaly 1 mey.
Nisy 2 sitrana, ka 94 izay ny fitambarany ary kosa 38 ireo mbola manaraka fitsaboana. Vehivavy avokoa ary "cas contact" ireo izy ireo: 27, 44, 47, ary 58 taona, samy teto Antananarivo avokoa, ary tsaboina ao amin’ny Hopitaly Befelatanana. Ny 2 tamin’izy ireo voa no misy soritr’aretina: mikohaka, reraka, manavy,... Betsaka ny zavatra efa fantatra sy azo antoka momba azy.Mbola manaporofo hatrany ireo tranga vaovao 4 ireo fa miparitaka eto Antananarivo ny Coronavirus ka noho izany zava-dehibe ny fiarovan-tena sy fanarahana ny toromarika. Ny Coronavirus moa dia tsimokaretina vaovao noheverina fa avy amin’ny biby niampita tamin’ny olombelona, ary mamindra amina samy olombelona. Ny piti-drora no ifindrany vokatry ny tsy fitandremana. Mifindra aloha be izy ity, na dia mbola ao anatin’ny olona tsisy soritr’aretina aza, dia efa mamindra. Ao ny milaza hoe 5 andro na 7 ny ifindrany, saingy mila tazonina foana ilay 15 andro.
Mbola eo am-pikarohana
Mbola manahirana ny mpitsabo maneran-tany, hoy ny Pr Vololontiana ity valanaretina ity. 630 any ho any no isan’ny fikarohana atao maneran-tany momba ny fanafody na fisorohana. Mbola tsy misy hoe ity no izy, fa mbola samy manao toy ny eto amintsika, hoy izy. Tsy misy mbola afaka miteny hoe ity fanafodinay ity no mety, eny fa na ny fisorohana aza. Mbola ho ela ny vaksiny, ary iaraha-mahalala fa miovaova io, mbola tsy fantatra na hiova hasiaka kokoa, hoy ity mpitsabo ity. Efa voaporofo fa afaka mamely ny taova rehetra, ary hita fa ireo karazana vondron’olona marefo kokoa mety ho voa noho ny hafa: olona lehibe loatra, ny bevohoka,… hoy hatrany ity mpitsabo ity. Ny mitandrina ny fanafody mahomby hatreto. Ilaina hatrany ny manasa tànana satria potiky ny raotran-tsavony sy ny alikaola ao amin’ny “gél désinfectant” ny covid-19, kanefa velona hatrany amin’ny 7 andro eny amin’ny hipetrahany.